Uummata Oromoo saboota ollaa waliin wal-irratti duulchisuun dadhabsiisaa, bara aangoo isaa dheereffachaa kan har’a ga’e Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa, Roobii kaleessaa (Onk. 20, 2021) ammoo, Poolisa Humna Addaa Sidaamaa qindeessuun, Hawaasa Oromoo Konyaa Gujii Bahaa Ona Girjaa keessa jiraatu irratti waraana bansiisee jiraachuu.
Kibba Oromiyaa, Konyaa Gujii Bahaa keessatti daafii dheerachuu hongeen, Uummanni Oromoo beela hamaaf saaxilamuu; horiinis gaaga’amaa jiraachuu. Dheerachuun hongee, balaa beelaa amma uumameef sababa battalaa haata’u malee, gannoota afran darban irraa qabuun, duulli qabata deggersa WBOn Uummata Oromoo irratti labsamuun, hawaasni Oromoo kun hidhaa, dararaa fi ajjeechaa hamaaf saaxilamee kan jiruu fi gargaarsis irraa muramee kan jiru ta'uu.
Duula duguuggaa sanyii, garee Faannoo jedhamu, akkasumas, Milishootaa fi Hawaasa Naannoo Amaaraan, Konyaa Matakkal, Ona Dibaax, Ganda Gaalessaa keessatti, Roobii kaleessaa (Onkoloolessa 13, 2021) Uummata Oromoo irratti banameen, Aayyoo Oromoo, kan deessee ulmaa jirtu tokko dabalatee, Oromoonni jaha (6) haala suukanneessaan ajjeefamuu.
Dhukaasa Oromoota Irreeffannaaf bobba’an irratti, Jimaata Onkoloolessa 8, 2021, Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gumii Eldalloo, Ardaa Qaallittii keessatti LMKIIn banameen, Sirni Irreechaa sun goolamuun addaan bittinneeffamuu; Oromoonni Irreeffachuuuf ba’an muraasnis achi-buuteen isaanii hanga guyyaa har’aatti kan hin beekamin ta’uu.
Lolli WBO fi LMKII humna guddaan gamasitti bobbaafame gidduutti, Konyaa Gujii Bahaa keessatti adeemsifamu, Wiixata Onkoloolessa 4, 2021 irraa qabuun, isa yeroo kamiirrayyuu daran jabaatee itti-fufee jiraachuu. Kanaanis, hanga Kamisa har’aatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irraa kanneen dhibbaan lakkaa’aman ajjeefamuu, danuunis madoon adabamuu fi booji’amuu. Lolli kun Ona Gumii Eldalloo, araddaa Boobaa jedhamtu keessatti, Kamisa har’aallee itti-fufiinsaan adeemsifamaa jiraachuu.
Ona Bulee Horaa keessatti, Uummanni Oromoo waraana MKII waliin ta’uun, guyyaa borii (Onkoloolessa 6, 2021) sakattaa WBO irratti akka bubba’uuf haal-dureen mijeeffamaa jiraachuu. Ta’us, Uummanni Oromoo WBO faana hiriiruun waraana PP loluuf, isa yeroo kamii irrayyuu qophii ta’ee jiraachuu.
Ayyaanni Irreechaa bara kanaa (2021) Hora Finfinneetti, Sambata kaleessaa (Onkoloolessa 2, 2021); Dilbata har’aa ammoo, Hora Bidhooftuutti kabajame, dhaadannoolee deggersa WBO, barbaachisummaa Walabummaa Oromiyaa fi jibba Impaayera Itoophiyaa ifatti dhageessisaniin dabaalamee ooluu.